नेपालमा छोटो अवधिमा धेरै संक्रमितको मृत्यु हुनुको कारण के ? किन यति धेरै संक्रमितको मृत्यु भयो ? – नेपाली संगसार
पत्रपत्रिकाबाट calendar_today १ जेष्ठ २०७८, 3:58 am
काठमाडौं । नेपालमा छोटो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट धेरैजनाको मृत्यु हुनुमा सही उपचारको अभाव कारण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चैत अन्तिममा सुरु भएयताको पाँच सातामा १ हजार ६ सय ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा तेब्बर हो। विज्ञले दोस्रो भेरियन्ट कोरोना संक्रमणमा पनि पहिलो लहरकै जति मृत्युदर हुने बताएका थिए।